Semalt: The Best Database Yokuchengetedza Web Scraping Data
Ko Postgres kubata Chinese text?
Vamwe webmasters vave vachimutsa mibvunzo pamusoro pekuti Postgres inobata magwaro echiChina. Mhinduro kumubvunzo uyu iho huru. Paunenge uchitenga database, yako yepurogiramu uye mutyairi wedhesi yezvinhu zviviri zvinokosha zvikuru. Postgres is web scraping database yakashanda nekutsigira Unicode. Muchigadzirwa chekuita database yako ye Postgres, funga kujekesa UTF-8 kukodha.
NOSQL yakasununguka uye iri nyore kushandisa database yakachengetedza dare mufomu rakashama. Nemuenzaniso, kana iwe uchibudisa dhora pamisika yemari, unofanirwa kuchenjerera nenzira iyo data yako yakachengetwa. Apa ndipo panopinda dambudziko. NoSQL database haina kunyanya kushandiswa kwekodzero yekuongorora. Kana ukarasa chikamu ichi, iwe unopedzisira uine dhidhi mune zvidzidzo zvisingaverengeki.
Postgres, kune rumwe rutivi, inobvumira mablogiki nevatengi kuti vashandise kusarudzwa kwe data. Postgres, web scraping database yakachengetwa, yakabudiswa nedhidhiyo mumabhadhari ebhenari. Iyi database inobatsira zvose HSTORE neJSON versions.
Postgres ndiro dhesi yepamusoro inoshandiswa kuchengetedza yakawandisa deta yakabudiswa mumitauro yakasiyana. Iyi database yakagadzirirwa zvose zviri kutsvaga nekutsvaga migumisiro. Postgres JSONB inozivikanwawo nokutarisa vamwe vanhu vemitauro yakadai seChina. Zvimwe zvinoshanda zvePostgres zvinosanganisira:
Dhiyabhorosi kudhonza nehutano hwemhando dzose;
Kuita nekutsvaga kwekutsvaga nekutsvaga mabasa;
Kuchengeta dhidzo dzakanyatsogadziriswa dzakabviswa kubva mu HTML tags;
Kudzorera mashoko kubva kune kutsvaga nzvimbo uye kuichengeta muzvidimbu zvinogadzirika;
Nei Postgres JSONB?
Dhiyabhorosi inobatsira inofanira kugadzirisa zvikwereti uye kuisa ruzivo mune mamwe ma datasetoni munguva chaiyo. Musarega kunonoka uye nguva dzinobata maitiro ako ekurasika. Postgres anoshandisa mazamu emagetsi kuti aparadze dhidhiyo muzvinyorwa zvakasiyana siyana zvekutsvaga nyore.
Kuchengetedza dhizinesi haisi yega nguva yekupindura nenguva. Kudzokorora chiitiko kunotora zvose. Shandisa masumbu ekutakura zvinyorwa-zvinyorwa uye udzivise indexing kusvikira wapedza kuisa data yako. Izvi zvinobatsira vatengi kutengesa maasitetisiti akawanda panguva imwe chete.
Kurondedzera chinhu chimwe chete hachina kumbova nyore. Ne Postgres web scraping database, unogona kukurumidza kuratidza chinhu chakajairika nekugadzirisa nyaya yacho mune imwe mutsara nekubatanidza rekodi uchishandisa integer yekunze yekunze. Ratidzai chikwata chenyika yekunze kuwana mhinduro dzako.
Unobatanidza zvinyorwa zvose uye zvigadzirwa zvepabonde paunenge uchichengeta hurukuro dze data here? Hapana chikonzero chokufunganya pamusoro peizvi. Rega Postgres JSON B anoita basa kwauri. Ne Postgres web scraping database, hapana re-parsing inodiwa Source .